लेख/ साहित्य Archives - Page 29 of 32 - Purbeli News
काठमाडौँ, २९ माघ । वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीको पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनको अनुभवमा आधारित ‘नलेखिएको इतिहास’ पुस्तक आज सार्वजनिक भयो । विभिन्न राजनीतिक आरोह अवरोहसहित हाल नेकपा (एमाले) मा रहनुभएका नेता मैनालीले झापा विद्रोहदेखि अहिलेसम्मका आफूसँग जोडिएका राजनीतिक घटनाक्रम समेट्नुभएको छ । पुस्तकमा जेलमा जीवनका भोगाइ, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ...
हरेकले आफ्नो जन्मसँगै मृत्यु पनि लिएर आएका छन् । त्यही मृत्यु कसैका लागि चाँडो त कसैका लागि ढिलो आइदिन्छ । हर जो कोहीलाई पनि मृत्युसँग डर नै लाग्छ तर यसको अर्थ आत्महत्या गर्नेहरू निडर र बहादुर हुन् भन्ने पनि हैन । आत्महत्या त जीवनको बोध गर्न नसक्नेहरूले, मानसिक संकुचनका रुग्णहरूले जीवनप्रति गर्ने अपराध हो, त्यसैले त धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि 'आत्महत्...
घिमिरेको ‘थप्पड’ सार्वजनिक
काठमाडौँ, २८ माघ । हास्यव्यङ्ग्यकार देवी घिमिरेको व्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रह ‘थप्पड’ को पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले संयुक्त रुपमा आज सार्वजनिक गर्नुभयो । सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा पूर्वसभामुख नेम्वाङले राजनीति विकृत्ति भएको कुरा हास्यव्यङ्ख्यमार्फत धेरै आउने गरेको र राजनीति सबैको नीति भएको हुँदा यसल...
बजारमा सिद्धिकिको “मनसुन लभ”
माघ १९, दाङ / साहित्यकार साजिदा सिद्धिकिको बहुप्रतिक्षित साहित्यिक कृति “मनसुन लभ” बजारमा आएको छ । साहित्यानुरागी युवा बर्ग लक्षित औपन्यासिक कृति मनसुन लभ सुरुवातमै अत्यधिक रुचाईएको छ । प्रेम गर्नेहरु प्रति समर्पित सत्य कथामा आधारीत कृति मनसुन लभ लाई सीसा नेपालले प्रकासन गरेको हो । यस कृतिको बिक्रि बाट प्राप्त रकमको दश प्रतिसत रकम गरिब तथा जेहेन्...
कथा: मेरो पहिलो सुहागरात !
बिहेको दिन डोलि अनमाई कार भित्र दुलई राखियो । म पनि उनी सँगै गाडि भित्र पसे । उनका साथीहरु बाहिरबाट कोई वाई वाई को इसारा, कोहि रुदै त कोहि बेहुलिलाई हसाउदै थिए। मलाई पनि आफ्ना साथीहरुले हसाँई रहेका थिए । हाँस हाँस आजै हो हास्ने दिन भोलिबाट रुनु पर्छ त्यसैमा अर्का साथीले थप्यो, थाहा छ ! केटी रुने भनेको बिवाहको दिन मात्र हो तर केटा हाँस्ने भनेको त्यह...
कथा “सौता व्यहोर्दा “
मेरो त्यो कलेज पढ्दै गरेको कलिलो उमेरमा रबिसँग लगनगाँठोमा बाँधिएर, अग्नि साक्षी राखी, जीवनभर सुखदुःखमा एकअर्कामा दुवैले साथ दिन्छौँ भनेर वाचाकसम खाँदै वैवाहिक जीवनमा बाँधियौँ । हामी दुवैको नयाँ जिन्दगीको सुरुवात भयो । त्यो मेरो १८ वर्षको कलिलो उमेरमा बाबुआमाको लाड प्यार न्यानु काख छोडेर रबिको जिन्दगीसँग जोडिएर रबिको जीवनसाथी भएँ । सुरुमा अलि नौलो...
ब्वाइफ्रेण्ड विदेशमा हुँदा अर्कै केटा माग्न आएपछि…
आइतबार, माघ ०९, २०७३
छोरीको बिहे समयमै गर्नुपर्छ । धेरै बुझ्ने भएपछि बिहे गर्न गाह्रो हुन्छ । ‘सेटाएर’ मैतिर थियो । बुझे पनि नबुजेझैँ बसिरहेँ । मेरो विचारमा सायद अलि अपरिपक्व हुँदा नै बिहे गर्दा केटीले बाबुआमाको रोजाइमा हस् भनी स्वीकार गर्छिन् र धेरै केटा देखाउनुपर्दैन भन्ने होला । केटाको कुरा ल्याउँदा नै यस्तो र उस्तो भनी खोट लगाउनाले पनि हजुरबुवाले यस्तो भनेको हु...
उसले भाइवरमा कोही अपरिचितलाई “हाई” भन्यो । एकै छिनमा उताबाट पनि “हलो” आइहाल्यो । ‘तिमी मलाई चिन्छौ ?’ केटीले सोधी, केटाले नचिने पनि अब चिन्ने बतायो । दुवै जनाले भाइवरमा गफ गर्दा आफुलाई कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए । केटीले आफु बिरामी भएर घरमैं आरामका लागि बसेको बताइ । केटाले आफ्नो पनि विदाको दिन परेकोले कुरा गर्न समय मिलेको बतायो । दुवै जना...
फेरि पनि छोरी ? डाक्टर साप भो सफा गरिदिनुस !
चण्डी प्रसाद नामूद महिला अधिकारकर्मी थिए । गाम ठाममा उनको नाम मात्रै सुन्दा पनि मान्छे सजग हुन्थे । एउटी मात्र छोरी छ बर्षकी पुगिसकेकी थिई । छोरा छोरी बराबरी भन्दै जिल्ला भित्र बाहिर हुने कार्यक्रममा गईरहन्थे उनी । श्रीमती गोमा पाँचौ पल्ट पनि गर्भवती भएको कुरा कसैलाई बताएनन् चण्डी प्रसादले । महिला र बालबालिका संबन्धि तालिमको काम बिशेषले डा...
तिम्रो के जान्छ र ! (कविता )
तिम्रै मुठ्ठीमा छ र त मेरो सास म सोचिरहन्छु मर्न दिन्नौ होला मलाई त्यसै–त्यसै ओइली झर्न दिन्नौ होला मलाई । तिमीलाई माया गर्नु तिम्रै भर पर्नु मेरो दोष हो र ! तिमीलाई यति राम्री कस्ले बनायो ? त्यसमा मेरो दोष छ र ! तिमीलाई देख्नु एकोहोरै सही माया बस्नु । अनि तिमी भने तर्कि तर्कि हिंड्नु लत्याए झै गर्नु प....र पुगेर फर्केर ह...